I-Callanetics yinkqubo equkethe imizimba emithathu emzimbeni. Kufuneka zenziwe ngeyure. Ngokuncediswa kule nkqubo, unako ukuqinisa iminyango, isisu, isifuba, kwaye ukongezelela, qinisa ubungakanani bakho. Nangona kunjalo, njengawo nawuphi na inkqubo yokuzivocavoca, i-callanetics inezinzuzo kunye neqhinga.
Pros of Callanetics
Le nkqubo yenzelwe ukuqeqesha ngeeyure ezimbini ngeveki. Kamva, xa ubunzima bakho buqhelekileyo, uya kujongana kunye neveki, ngeyure. Ngoko ke uya kugcina umlinganiselo wakho. Xa ubona ukuba umzimba wakho uphelele, unokwenza yonke imizuzu elishumi elinesihlanu, kodwa yonke imihla.
Ngokwe-Callan Pinkney, ngubani odale le nkqubo, iseshoni zokuqeqesha ezilishumi zanele ukwenza ukuba umfazi abe neminyaka elishumi emncinci. Iyure enye yommangaliso-gymnastics ilingana neeyure ezisixhenxe zokuzivocavoca eziqhelekileyo okanye iiyure ezingamashumi amabini anesine ze-aerobics. Kakade emva kweeseshoni ezininzi zokuzivocavoca unokuziva utsho utshintsho olubonakalayo emzimbeni - oku kubonakala kokunciphisa umzimba ubunzima nokuguqula umumo walo. Kodwa ukuze ufezekise umphumo ophezulu, kufuneka ulandele ngokucacileyo imiyalelo ekhethekileyo.
Umntu wesibhakabhaka uyaba mncinci ngenxa yemisipha. Umzimba wonke womntu udibene kunye nezihlunu ezahlukeneyo. Ukuba inxalenye yemisipha ayisebenzisi, ingafaka ifom yeefom. Ukuba iimisipha zakho zingabonakali kwaye zingaphuthunyanga, musa ukuthukuthela, kuba ngama-gymnastics rhoqo angenziwa amnandi kwaye aqine. Ngenxa yoko, umzobo wakho uza kujonga umdlalo kwaye ulungele. I-Callanetics kufuneka ifakwe ngekhefu, okokuthi, ukunyamezela okuthile kufuneka kuhlale kungatshintshi ngexesha loqeqesho, ngemizuzu embalwa. Siyabulela oku, izihlunu zithatha ukunweba ukuze zinikezele ngokomeleza nokwandisa.
Ukuzivocavoca-callanetics kuyomeleza kwaye kuqeqesha ubuninzi bemisipha yomzimba wesifazana - izihlunu zesikhumba, izigqoko, amahlombe, umva, izandla, kunye ne-press. Inxalenye nganye yomzimba ithatha inxaxheba ngokuthe ngqo kuqeqesho. I-gymnastics ihlolwe idibeneyo ebaluleke kakhulu, njengemisebenzi eyenzelwe ukululalisa izihlunu, kunye nezimo ezinzima. Oku kukuvumela ukuba usebenzise imisipha ejulile kwinkqubo yoqeqesho - loo nto ibhinqa lingaxinzeki ngexesha lokuphila kwakhe kwansuku zonke.
Ukongeza kwi-gymnastics callanetics inceda ukujamelana nokungahambi kakubi njengendawo yokugcoba i-fatty, inceda ukulungelelanisa iinkqubo ze-metabolic. Oku kubaluleke kakhulu, ngenxa yokuba ukungaphumeleli kweenkqubo eziqhelekileyo kubakhokelela ekutyebeni. I-Callanetics nayo inceda ekufezekiseni i-posture, eyimfuneko kumntu onempilo. Abo bantu ababandakanyeka kwi-callanetics ixesha elide, bathi ezi zivivinyo ziyakwazi ukuguqula nawuphi na umfazi wendlukazi wesifazane ibe ngumzekelo omncinane. Nangona kunjalo, ku funeka kuqatshelwe ukuba ukuphumeza iziphumo ezilungileyo, njengoko kunjalo, kubalulekile ukuba usebenze kanzima kwaye ngenjongo. Ngaloo ndlela kuphela iphupha lakho lokuba nomfanekiso we-ballerina uzaliseka. I-Callanetics ibizwa ngomsebenzi womzimba kunye novuyo ngomphefumlo, ngoko kubalulekile ukuqala iiklasi zokuzikhethela kwakho kunye kunye nexesha elifanelekileyo.
Iyona nto iphambili ye-callanetics kukuba kukho ukuchasene nalo mkhuba. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba iqela elithile labantu ngokubanzi abakwazi ukubandakanya kwi-callanetics. Hayi, ithetha kuphela ukuba abanye abantu bangasebenzisa ukusetyenziswa kwezixhobo ze-callanetics kungekho nemithwalo enjalo njengoko imiselweyo. Ngokomzekelo, ukuba uqeqesho oluthile lufuneka luyenziwe ngokuphindaphindiweyo ngamashumi amabini anesihlanu ukuya kuma-amathathu, ngokuphindaphindiweyo, ngoko abantu abangafuni imisebenzi yomzimba kufuneka benze okuphindaphindiweyo ezintlanu okanye ezintandathu kuphela. Kuzo i-gymnastics iya kusebenza, kodwa iziphumo aziyi kubonakala ngokukhawuleza.
Oku kuyinyani ngakumbi kulabo abagulayo nasiphi na isifo se-cardiovascular. Ukuba uye wafumana ingxaki enkulu, kulindeleke ukuba ulinde unyaka ngaphambi kokuba uqale ukuqhuba i-callanetics. Ukuba usandula ukuzala umntwana kunye nendlela yokusetyenziswa kwecandelo, ufanele ulinde unyaka kunye nesiqingatha ngaphambi kokujongana neefowanetics.
Ukutya kunye nokunakekelwa komzimba
U-Aerobics, ukubunjwa, ukufaneleka
Unyango lwe-arthritis ye-rheumatoid ngendlela yokwenza i-acupuncture
Ngubani oza kuvota ngo-2016 ukhetho eRussia ngaphandle kwe-United Kingdom yaseRashiya. Amagama abaviwa kwi-State Duma evela eMoscow naseSt. Petersburg
UVictoria Daineko wathuthuzelwa emva kokuqhawula umtshato kwiingalo zeAlexei Chadov
Indlela yokwenza i-enema yokulahleka kwesisindo?
I sandwich ezishisayo kunye noshizi